“Geeridu dibnaha waa mid qudha, dihasho yeedhmeede,
(1948kii – 2015ka)
Dib miyaan Ducaaloow dheguhu daacad u maqlaynin?”
‘Innaa Lillaah wa innaa ileyhi raajicuun.’ Waa geeri iyo camalkeed. Aan ku cudur-daarto tuduc aad u gaaban oo ku jiray maansadii Daalacan ee Hadraawi oo ah:
Gaadhigii ayaan dub u kala-xeelay aniga oo go’aansaday in aan soo maro dhakhtar aan la ballansanaa. Waxaan tegay Xarunta Baashista ee Rejo oo aan dhiigag iskaga qaadayay. Markii aan dhammaystay ee aan ka soo baxayay ayaa waxa iga dabo yimid wiil dhallinyaro ah oo Xaruntaa Rejo ka shaqaynayay oo aanu is-naqaannay. Isaga oo baalle-daymoonaya ayuu cod aad u hooseeyay oo aanay kalsooni badani ku dhehhnayn, dhegta ii saaray: “Miyaad maqashay geerida Cawke.” Aniguna yaabay oo idhi: “Cawke waa kee? Ma Ina Xasan-cawke?” Ku-ye wiilkii Guuleedna: “Haa.”
Aniga oo yar yaabban oo hoos isu weydiinaya halkii uu ku danbeeyay maa-daama an magaalada Hargeysa ku ogaa, ayaan Guuleed dib su’aal ugu celiyay. Waxaan weydiiyay halka uu ka maqlay. Ku-ye isaga oo aan shakisanayn: “Facebook-ga ayaa saaka ka akhriyay.” Inta aan hoos u hiifay Facebook-ga, ayaan aniga oo sii dhaqaaqaya ku idhi: “Waa beentood, maxaa yeelay maalinba qof nool ayay aasaan oo ay ku dul qoraan war deg-deg ah.” Sidaas ayaan ku dhaqaaqay aniga oo Guuleed shaki ku abuuray.
Aniga oo aan Xafiiskii Waddani gaadhin ayuu Guuleed i soo garaacay, ku-ye: “Adeer waa dhab oo wuxu ku geeriyooday saaka magaalada Jigjiga.” Markan warka dhiillada xanbaarsani waa uu i taabtay. Si buuxda uma xaqiiqsan bal se shaki iyo walaac ayuu igu dhaliyay. Guuleeed ayaan su’aal aan ku shaki-baxo weydiiyay oo ahayd: “Adeer, yaad ka hubisay ee warkan naxdinta leh ku saxeexan?” Guuleed oo aan is-dhibin isla markaana aan ii soo war-wareegin, ayaa iigu jawaabay: “Mulkiilaha Maalinlaha Geeska ee Raambo ayaan weydiiyay oo ii caddeeyay.”
Xaruntii Xisbiga Waddani markii aan gaadhay, ayaan Maxamed-raambo tilifoon u diray. Wuxu ii xaqiijiyay in uu Axmed Xasan-cawke si kedis ugu dhintay magaalada Jigjiga meydkiisana isla maanta la soo qaadayo. Waa sidii mocooyooyinkeen odhan jireen e’, warkaasi wuxu noqday ‘Xaqiiqal Maka.’ Dhowr tilifon oo kale ayaan diray oo uu ka mid ahaa Yoonis Cali Nuur. Qaarkood ayaa iigu jawaabayay: “Waxaan weli la kala caddayn Kalabaydh oo aabbihii ku aasan yahay iyo Wajaale midka lagu aasayo.” Mararka qaarkood ayay magaalada Gebilay sheekada xabaasha soo gelaysay. Qaar kale aya ku odhanayay saddex xabaalood ayaa la kala qoday.
Aabbihii ayaa la odhan jiray Xasan-cawke oo ay tahay in aad u qaadataan in Cawke ay ahayd sifo aabbihii magaciisa lagu ladhay. Haddii aan cabbaar raadiyay macnaha ereyga Cawke waxa la iigu sheegay adeygga ama qofnimo ha noqoto, ama hadalka ha noqoto ama si kaleba ha noqoto e’.
Axmed Xasan Suufi-cilmi oo loo yaqaannay Axmed Xasan-cawke ama Ina Xasan-cawke wuxu ku dhashay magaalada Tog-wajaale 1948kii. Da’diisa ma aan sugin oo qoraal kuma aan helin, bal se waxaan ka dhaqaaqay Muuse Biixi Cabdi oo ay isku dugsi iyo fasalba ahaayeen. Hooyadii waxay ahayd Caasha Aw Faarax Xirsi Mixille. Gabadh keliya ayay Axmed wada dhasheen oo ah Caneb.
Aan sheekadeennii Ina Xasan-cawke ku soo noqdo e’ isaga iyo colkii la wada qaatay ayaa tababarro iyo carbis lagu bilaabay. Waxa u bilaabay Raacaa 2aad oo ay ka mid ahaayeen: Mustafe Xaaji Nuur, Yaasiin Xaaji Ismaaciil Jirde, Siciid Caddaani, Mijir Qaaddi-Maxamud, Idiris Xasan Diirye, Weli Xaaji Cali iyo Idiris Cigaal Nuur. Raacii ugu horreeyay ee weriyayaasha waxaynu ka xusi karaynaa Xaaji Cabdi Ayuub oo ahaa qofkii soomaaliyeed ee ugu horreeyay ee BBC-da ka hadla, kuna furay “Halkani waa BBC oo idin bariidin.”
Axmed Xasan-cawke wuxu ka mid noqday weriyayaasha ugu fiican xagga tebinta ciyaaraha oo aan filayo in uu kaga deyday Weli Xaaji Cali oo cod degdeg ah oo cagta ama gacanta kubbadda wadata la xawliya ku gudbin jiray wararka ciyaaraha. Waxaan Dugsiga Sare ee Benaadir oo Muqdisho ku yaalla ku jiray 1964kii – 1968kii. Garoon kubbadeed ayaa dugsiga noogu yaallay oo aanu galbaha qaar kubbad ku ciyaari jirnay. Waxaan xusuustaa in uu noo iman jiray Weli Xaaji Cali oo rikoodh UHR ah sitaa oo kuwii cajaladaha waaweynaa ah. Halkaas ayuu annaga oo ciyaarayna ku baran jiray sida ciyaaraha wararkooda loo gudbiyo. Mararka qaarkood carruurta daawnaysa ayuu urursan jiray oo ku odhan jiran qaylo iyo sawaxan sameeya oo uu ka duubi jiray. Weli Xaaji Cali waa ninkii ciyaarihii gobollada oo la ciyaarayo oo ay isku haleeleen koox reer woqooyi ah iyo mid reer koonfureed ahi inta uu is-illoobay yidhi: “Innaga aya wadanna.”
Xasan-cawke ayaa beri wiil malaha shaqo loo doonayay loo keenay. Baristii wiilka la barayay ayaa lagu yidhi: “Waa wiil fiican oo Reer Jigjiga ah.” Xasan-cawkena maalintaa wuxu reebay odhahhda ah: “Waa Reer Jigjiga iyo waa wiil fiican kala daaya.” Waxaan ka guntay inahaas Xasan-cawke ku saabsan muddaakaraat uu beryaha qaar noo marin jiray Xasan Warsame Seed oo aad u yaqaannay lana soo noolaa muddo dheeri.
Waqti 2.30kii gelinka danbe ku beegnaa ayaanu Wajaale gaadhnay. Magaaladiiba waa ceeryoon oo dad iyo baabuur ayay la ciir-ciiraysaa. Saacadihii hore macaa baabuurta waa la tallaabayay, bal se xilliyadaa aanu magaalada gaadhnay baabuurtii waa la joojiyay oo lug ayaa lagu tallaabayay. Baabuur ‘Surf’ ah oo uu watay Guddoomiyaha magaalada iyo ninka amniga oo isagu reer Lafo-ciise ahaa ayaa na qaaday oo na geeyay gurigii meydka Axmed yaallay. Waxaanu ka mid ahayn dadkii sii gelbiyay ee fursadda u helay in ay indhaha ka qaadaan intii aan la aasin.
Su’aasha ugu badnayd ee aaska la iska weydiinayay waxay ahayd: Maxaa daanta ama qarka Itoobiya ee Tog-wajaale loogu aasayaa? Malaha waxay ku fiicnayd in labada maamul ee Itoobiya iyo Somaliland la weydiiyo. Anigu se, bal aan faduuli iska noqdo oo aan isku dayo in aan ka jawaabo. Si aad u garataan aan sababayntayda male-awaalka iyo mutihiska qodobbeeyo:
Labada dal ama mas’uuliinta labada dal oo aan isku diidin ama aan ku murminba halka lagu aasayo,
Waxaan is-leeyahay intaa waxa raacaya Xukuumadda Somaliland oo aan looga baran ama aan la isku hallayn karayn haynta iyo ilaalinta hab-maamuuska madaxda goobta imanaysa. Aaskii Qaryaan Dhoodaan ayaa la ogaa sidii habqanka iyo habaqlaha ahayd ee loo tegay. Jaantaa rogan ayay ahayd. La-yaab ma laha madaxda Kililku haddii ay ka baqday in ay tii oo kale dhacdo, run ahaantiina waa ay dhacday. Waxba yaan ku sii tiigaalin Xukuumaddeenna oo aanay iga jeedin mowduuca aan u ambo-baxay. Malahayga mareegaha iyo saxaafadda kaleba ka dheehate fool-xumooyinkii meesha ka dhacay. Waxaasi ma ay ahayn wax loo aaneeyo Axmed Xasan-cawke oo aaskiisii la joogay. Xaasha! Tani waxay ahayd ‘Geeri arooskeed.’ Si caaqiibo iyo xarragoba leh ayaa loo sii gelbiyay oo loo sii sagootiyay.
← Door-roonihii Da’dii aan ogaa: Mujaahid Maxamed Ibraahin Xirsi (Bashiir)(1956kii – 1987kii)
Fu’aad Aadan Cadde: Han-fogaan……..Kal-furnaan →